A3 Bhaibheri Rakasvika Sei Kwatiri? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Fundo Nhamba 5—Rugwaro rwechiHebheru rweMagwaro Matsvene
Mashoko iwayo ndeechokwadi, kunyange zvazvo mazuva ano pasisina zvinyorwa zvekutangatanga zveMagwaro echiHebheru nechiAramaiki* kana zveMagwaro echiKristu echiGiriki. Saka tingava sei nechokwadi chekuti mashoko ari muBhaibheri ratiinaro mazuva ano anonyatsotaura zvaiva muzvinyorwa zvekutanga zvakafemerwa?
Kana ari Magwaro echiHebheru, chimwe chakaita kuti achengetedzwe yaiva tsika yakatangwa kare naMwari yekuti mashoko ari muMagwaro aifanira kubviswa pane rimwe gwaro achiiswa pane rimwe.* Semuenzaniso, Jehovha akarayira madzimambo aIsraeri kuti mumwe nemumwe ave negwaro rake ega reMutemo. (Dheuteronomi 17:18) Mwari akapawo vaRevhi basa rekuchengetedza Mutemo uye kuudzidzisa vanhu. (Dheuteronomi 31:26; Nehemiya 8:7) Pashure pekutapwa kwevaJudha vachiendeswa kuBhabhironi, pakamuka rimwe boka revanyori (vaSoferimu). (Ezra 7:6) Nekufamba kwenguva, vanyori ivavo vakanyora zvinyorwa zvakawanda zvemabhuku 39 eMagwaro echiHebheru.
Kana iri mhedziso refu yaMako 16 (mavhesi 9-20), mhedziso pfupi yaMako 16, uye mashoko ari pana Johani 7:53–8:11, zviri pachena kuti mavhesi iwayo ese akanga asingawanikwi muzvinyorwa zvekutanga. Saka mavhesi iwayo enhema haana kuiswa mushanduro ino yakadzokororwa.*
Aya ndiwo achange achinzi Magwaro echiHebheru kubvira pandima ino zvichienda mberi.
Chimwe chaiita kuti magwaro arambe achidzokororwa kunyorwa ndechekuti paainyorerwa pacho paikurumidza kusakara.
Mamwe mashoko anotsanangura kuti nei ndima idzi dzisiri dzechokwadi anowanikwa mumashoko emuzasi eBhaibheri reChirungu reNew World Translation of the Holy Scriptures—With References, rakabudiswa muna 1984.